gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in dagaal beeleed u dhaxeeya laba malayshiyaad beeleed oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada Kismaayo uu dib u qarxay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in dagaal beeleed u dhaxeeya laba malayshiyaad beeleed oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada Kismaayo uu dib u qarxay
Allhadaaftimo April 2, 2020 Uncategorized
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubadda Hoose ayaa sheegaya in dagaal beeleed u dhaxeeya laba malayshiyaad beeleed oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada Kismaayo uu dib u qarxay.
Wararka ayaa sidoo kale intaas kusii daraya in dhawaqa rasaasta noocyadeeda kala duwan laga maqlayo duleedka magaalada, taas oo ay isku adeegsanayaan dhinacyada dagaalamaya.
In ka badan 50 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyootay colaadii muddo isbuuc ah ka taagnayd duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo kasoo kala jeeda dhinacyada dagaalamay.
Culimada iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku dadaalaya sidii loo joojin lahaa dagaalka, waxaana dhinacyada dagaalamaya ay dirirtoodu salka ku haysaa dhul daaqsimeed iyo aanooyin qabiil.
Maamulka Jubbaland ayaa baaq nabadeed u diray labada dhinac ee dagaalku u dhaxeeyo, waxaana xaalku uu yahay mid weli cakiran
Previous Wareysi Somalida Udhimatay Caabuqa Halis Badan Ma Dawooyin Baa Lagu Tijaabiyay ?
Next Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa xerada ciidamada Xorgoble Qardho tababar ugu soo xiray cutubyo